News - Ugbu a, batrị lithium ike na batrị lithium nchekwa dị oke mkpa na ụlọ ọrụ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, ngwa ọrụ aka nke batrị lithium na nchekwa nchekwa na-elekwasị anya na mpaghara nke ọdụ ọdụ ọdụ ọdụ ọkụ, usoro nchekwa ụlọ, igwe eletriki na ọdụ ụgbọ, ngwa eletriki, ụlọ ọrụ ụlọ na mpaghara ndị ọzọ. N'ime oge atụmatụ 13th Five Plan, ahịa nchekwa ume nke China ga-ebute ụzọ n'ọhịa nke ngwa ọrụ ọha na eze, site na ịbanye site na ike na ịnyefe ya n'akụkụ onye ọrụ. Dabere na data ahụ, olu ngwa ngwa lithium batrị nchekwa nchekwa na 2017 bụ ihe dịka 5.8gwh, na ahịa ahịa nke batrị lithium-ion ga-aga n'ihu na-arịwanye elu kwa afọ site na afọ na 2018.
Dabere na ọnọdụ ngwa ahụ, enwere ike kewaa batrị lithium-ion na oriri, ike na nchekwa ume. Ka ọ dị ugbu a, batrị lithium ike na batrị lithium nchekwa dị oke mkpa na ụlọ ọrụ ahụ. Dabere na amụma nke ndị ọkachamara nwere ikike, ọnụ ọgụgụ nke batrị lithium ike na ngwa niile nke batrị lithium na China na-atụ anya ịrị elu 70% site na 2020, batrị ike ga-abụkwa isi ike nke batrị lithium. Batrị lithium ike ga-abụ isi ike batrị lithium
Ọganihu ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ batrị lithium bụ tumadi n'ihi amụma ahụ na-akwalite mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala ike ọhụrụ. Na Eprel 2017, Ministri nke ụlọ ọrụ na teknụzụ ozi nke ndị mmadụ Republic of China kpọkwara aha na "usoro mmepe ogologo na ogologo oge nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala" na mmepụta na ire nke ụgbọ ala ọhụrụ ga-erute nde 2 na 2020, na na ugbo ala ohuru kwesiri ikwuputa ihe kariri 20% nke imeputa ugbo ala na ire ahia site na 2025. Enwere ike ihu na ume ohuru na nchekwa ahihia ndu na ulo oru nchedo gburugburu ebe obibi ndi ozo gha abu ogidi ulo oru ndi mmadu di n ’odinihu.
N'ọdịnihu nke teknụzụ batrị ike, ternary na-abụ isi na-ewu ewu. E jiri ya tụnyere lithium cobalt oxide, lithium iron phosphate na lithium manganese dioxide batrị, batrị lithium nke ternary nwere njirimara nke ike dị elu, ikpo okwu ọkụ dị elu, mgbatị mgbatị dị elu, arụmọrụ okirikiri dị mma, nrụpụta elektrọnik wdg. O nwere uru doro anya na imeziwanye ugbo ala ohuru. N'otu oge ahụ, ọ nwekwara uru nke ike nrụpụta dị elu, arụmọrụ dị mma dị ala, ma nwee ike ịmegharị na ọnọdụ ihu igwe niile. Maka ugbo ala eletrik, o doro anya na ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-echegbu onwe ha banyere ntachi obi na nchekwa ya, na batrị lithium-ion doro anya na ọ ka mma.
Site na mmụba ngwa ngwa nke ụgbọ ala eletrik, ọchịchọ maka batrị lithium-ion ike amụbawo nke ukwuu, nke ghọrọ isi ike na-ebute uto nke ụlọ ọrụ batrị lithium-ion. Batrị Lithium bụ ngwaahịa siri ike. Amuru ya na 1980s ma mechaa ogologo mmiri ozuzo na teknụzụ ohuru. N'otu oge ahụ, n'agbanyeghị usoro mmepụta ma ọ bụ mbibi nke lithium batrị na-eme obere nsogbu na gburugburu ebe obibi, nke dabara na mkpa nke mmepe mmekọrịta ugbu a. Ya mere, batrị lithium abụrụla isi ihe ọhụụ nke ọgbọ ọhụrụ nke ume. Na ọkara okwu, ugbu a njem technology upgrading bụ isi nke zuru ụwa ọnụ ngwa technology upgrading. Dika nkwado nkwado di nkpa maka ikwalite teknụzụ njem, a na-atụ anya batrị lithium nwere nnukwu mmepe n'ime afọ 3-5 sochirinụ.